यस्तै रहे नेपाल र नेपालीले हार्ने निश्चित छ « Pana Khabar
यस्तै रहे नेपाल र नेपालीले हार्ने निश्चित छ
समय : 5:19 pm
पृथ्बी नारायण शाहले काठमाडौं उपत्यकामाथि विजय हासिल गरेपछि ज्योतिषीहरुलाई बोलाएर सोधेका थिए रे – म कुन ठाउँमा बसेर राज्य सञ्चालन गरु ? ज्योतिषीहरुको सुझाव थियो रे – भादगाउँ बसे राजालाई फाप्दैन , पाटन बसे राजकुमारलाई फाप्दैन , कान्तिपुर बसे प्रधानमन्त्रीलाई फाप्दैन । हो रहेछ , यो देशका हरेक प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म त्यही नियतिमा रुमल्लिरहेका छन् । भलै देश गणतन्त्रमा नै गइसकेको किन नहोस ।
नेपालको राजनीतिको इतिहास वास्तवमा सुखद कहिल्यै रहेन । सत्ता दाउपेचका दुर्दान्त कथाहरु कोरिएका छन् यो मुलुकमा । चीन र भारत भन्दा अघि नाम कमाएको यो मुलुक अहिले उनीहरुले नाम कमाउदा गुमनाम झै बनेको छ । कारण उही हो – अस्थिर राजनीतिक शक्ति र देशप्रतिको प्रतिबद्ध राजनेताको अभाव । मुलुक फेरि आएर एक पटक संगीन मोडमा उभिएको छ । सत्ताको दाउँपेचको फोहरी खेलले मुलुकलाई नजानिदो गरि अध्याँरो तर्फ उन्मुख गराउदैछ । धेरै समस्या र चुनौतीहरु तेर्सिएको वर्तमान अवस्थामा मुुलुक एक ढिक्का हुनुपर्ने हो ।
तर दुःखको पक्ष ः मुलुकको राजनीति विभाजित छ , त्यही राजनीतिको रङमा आम जनता पनि विभाजित छन् । एउटा जटिलताको समाधान नखोजे दर्जनौ जटिलताले बाटो खोल्छन् । नयाँ संविधान न परिपक्व बनेको छ नत कार्यान्वयन नै हुन पाएको छ । २०४७ सालको विश्वको नै उत्कृष्ट भनिएको संविधानको समेत सबै धाराको प्रयोग हेरेका नेपाली जनताले कार्यान्वयनको तहमा नपुगेको संविधानको मर्ममा समेत प्रवेश गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
भूकम्पले थलिएको अर्थतन्त्रमाथि नाकावन्दीले थपेको भार छ । संविधान कार्यान्वयनको जटिल विषय थाँती छ , संघीयताको वहस चर्कदो छ । तर दलहरु भने सत्ताको खेलमा मात्र केन्द्रित छन । जुन खेलले जनता आजित बनेका छन् । राजनीतिक अन्यौलताले उनीहरुमा मात्र निराशा थपेको छ ।
अब मुलुकको ध्यान व्यवस्थापिका संसद र त्यसपछि शीतल निवास तर्फ केन्द्रित हुने तरखरमा छ । कानून र संविधानको व्याख्या आफ्नै स्वार्थ अनुकुल हुने गरी गरिन थालेका छन् । विदेशी शक्तिहरु निरीह नेपाल र नेपालीको शीरमाथि गीर खेल्न व्यस्त छन् । कस्को स्वार्थले जित्ने हो ? त्यस्मा उसैले खुसी मनाउला । तर नेपाल र नेपालीले भन्ने सधै हार्ने निश्चित छ ।
माधव नेपालको गृहजिल्ला रौतहटमा कांग्रेस पहिलो एमाले निल
महोत्तरीमा राजपा पहिलो, एमाले शून्य
रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउ : एमाले